Orinasa fiarovana fiarovana afo - Mpanamboatra vokatra mpamono afo, mpamokatra
Fampiharana: Toy ny aerospace, solika, indostrian'ny simika, herinaratra, metallurgy, fiarovana nasionaly, indostria hazavana sy lamba ary tranobe hafa any ivelany dia miaro ny afo amin'ny firafitry ny vy matevina, ary mety indrindra amin'ny tetik'asa sasany amin'ny vy mety hampidi-doza akora simika hydrocarbon (toy ny solika, solvent, sns.), toy ny injeniera petrochemical, garazy, sehatra fandavahana solika, toha-panohanana toerana fitahirizana solika.
Fananganana mora: azo ampiasaina ny famafazana, ny firakotra sy ny fikosehana. Adhesion mahery: manana firaiketam-po mahery amin'ny epoxy karazana, karazana alkyd ary karazana phenol antirust primer, izay mateza sy mateza, be mpampiasa, miaraka amin'ny kalitao avo sy vidiny ambany. Cdgc-trano vy somary manify firafitra retardant firafitra dia mety amin'ny fiarovana afo amin'ireo mpikambana mitondra entana amin'ny tetik'asa firafitra vy isan-karazany miaraka amin'ny fetra fanoherana afo mihoatra ny 2 ora.
Fametahana fireproof matevina ho an'ny firafitra vy dia vokatra fiarovana tontolo iainana avo lenta novokarin'ny orinasanay araka ny fenitra nasionalin'ny gb14907-2018. Rehefa hafana ny vokatra dia ho simba ny singa mamelombelona ao anaty horonantsary rehefa mafanaina mba hamoronana fantsona hafanana matevina sy mitovy ary fitomboan'ny gazy karbonika fanitarana oxygen. Mba hiarovana ny firafitry ny vy.
Fananganana mora: azo ampiasaina ny famafazana, ny firakotra sy ny fikosehana. Adhesion mahery: manana firaiketam-po mahery amin'ny epoxy karazana, karazana alkyd ary karazana phenol antirust primer, izay mateza sy mateza, be mpampiasa, miaraka amin'ny kalitao avo sy vidiny ambany. Cdgc-trano vy somary manify firafitra retardant firafitra dia mety amin'ny fiarovana afo amin'ireo mpikambana mitondra entana amin'ny tetik'asa firafitra vy isan-karazany miaraka amin'ny fetra fanoherana afo mihoatra ny 2 ora. Toy ny aerospace, solika, indostrian'ny simika, herinaratra, metallurgy, fiarovana nasionaly, indostrian'ny hazavana sy lamba ary tranobe hafa any ivelany dia miaro ny fiarovana ny vy amin'ny vy, ary mety indrindra amin'ny tetik'asa sasany amin'ny vy misy ahiana amin'ny simika hydrocarbon. (toy ny solika, solvent, sns.), toy ny injeniera petrochemical, garazy, sehatra fandavahana solika, toha-panohanana toerana fitahirizana solika, sns.